WhatsApp ကိုအသံမှတ်စုများအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်လိမ့်မည် Androidsis
အသံမှတ်စုများကိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်မကြာမီ WhatsApp သို့ရောက်လိမ့်မည်
Manuel Ramirez | | Android application များ, NOTICIAS, Whatsapp
WhatsApp သည်အချိန်နှင့်အမျှသိသိသာသာသတင်းများဖြင့်လည်းဆက်လက်တိုးတက်နေသည် built-in အသံမှတ်စုတို၏အလိုအလျှောက်ပြန်ဖွင့် ထူးချွန်သည့် chat app သို့။
လျှောက်လွှာတစ်ခု မကြာခဏသတင်းမရှိခြင်းလည်းမရှိ တဖန်ဤအချိန်မှာအသံမှတ်စုများကိုအတန်းတစ်ချပ်ဖြင့်လက်ခံရရှိသူများအတွက်၎င်းတို့အားအတန်းတစ်တန်းတည်းဖြင့်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်းသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
WaBetaInfo မှနောက်ဆုံးသိနိုင်သည် iOS version များ၏ beta ကိုပြောင်းလဲခြင်း WhatsApp သို့အသံမှတ်စုများအလိုအလျောက်ပုံတူကူးယူခြင်းမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုအလင်းအလုံအလောက်ပေးထားသည်။
သူတို့အားပြောင်းလဲမှုမှတ်စုများတွင်, အဘယျသို့တစ်ခုဖော်ပြထားခြင်းလည်းရှိပါသည် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်အမှောင်ဆောင်မှုပေါင်းစည်းမှု အထူးသဖြင့်သင်အိပ်ရာထဲမှာအိပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ အလင်းအများကြီးနှင့်အတူအခန်းရေလွှမ်းမိုး; မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုလျှော့ချလျှင်ပင် (ဖြစ်နိုင်လျှင်ထပ်မံလျှော့ချရန်ဤ app ကိုအသုံးပြုပါ).
WhatsApp အသစ်၏အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ lAutoplay သည်ငါတို့အားကစားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် ကျန်တဲ့အရာတွေကိုကစားနေတုန်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်နိုင်အောင်ပထမအသံမှတ်စုကိုငါတို့ဆီပို့လိုက်တယ်။
အသစ်တခုအင်္ဂါရပ် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်လိမ့်မယ် ပြီးတော့အသံမှတ်စုတစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုနှိပ်ဖို့လိုတာကိုရှောင်နိုင်လိမ့်မယ်။ ထပ်ခါတလဲလဲပျင်းစရာကောင်းပြီးထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မိသောလုပ်ရပ်ကကျွန်ုပ်တို့အားထိုစာကိုပေးပို့ပြီးသည့်တိုင်အောင်ကျော်လွန်သွားစေနိုင်သည်။
တစ် ဦး က WhatsApp ကို app ထဲမှာကြော်ငြာတွေထည့်ပါလိမ့်မယ် အရေးကြီးသောသတင်းများကိုဆက်လက်ယူဆောင်လာရန်ဆက်လက်တက်ရောက်မည်ဖြစ်သည် ဒါကြောင့်အသံမှတ်စုများ၏အလိုအလျှောက်မျိုးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်တဖန်စကားလက်ဆုံပြတင်းပေါက်ဖွင့်ချင်ကြဘူးသောသူတို့အဘို့, ကြီးစွာသောဆိုက်ရောက်; သင့်အတွက်ငါတို့လည်းရှိတယ် ဗီဒီယိုများကစားရန်ရေပေါ်ပြတင်းပေါက်ကဘာလဲ.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့အကြောင်းကိုဘာမှမသိသေးဘူး တက်ဘလက်များအတွက် wassap.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အသံမှတ်စုများကိုအလိုအလျောက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်မကြာမီ WhatsApp သို့ရောက်လိမ့်မည်